Aan soo dhaweyno labada fanka ku cusub 2019: Karan Deol iyo Saher Bamba – Filimside.net
Aan soo dhaweyno labada fanka ku cusub 2019: Karan Deol iyo Saher Bamba
Sanadkan 2019 waa sanad kale oo ay Bollywood-ka kusoo biiri doonaan jiil cusub oo magac raadis iyo shaqo raadis ah balse marka kowaad u baahan in lasoo dhaweeyo ama garab la siiyo si u sal dhigtaan safarkooda dheer ee waayaha fanka Hindiya waxaana sugeyso waddo dheer oo guul iyo guuldaro wadato.
Haddaba rer Deol jiilkooda sedexaad ayaa 2019 lasoo dhaweenayaa cid kale ma ahan waa Karan Deol wiilka uu dhalay Sunny Deol kaasi oo qof walbo sugaayo inuu fanka kusoo biiro si uu usii wado magaca Dharmendra Deol qoyskan u abuuray kadib Sunny Deol kusii wareejiyay haatana Sunny wiilkiisa Karan Deol ayuu sii wadista magaca reer Deol ku wareejiyay.
Karan Deol filimkiisa kowaad Pal Pal Dil Ke Paas waxaa Director iyo soo saare ka ah Sunny Deol oo doonayo wiilkiisa aqoonsi wacan filimkan inuu ku helo fariin ahaana waa jaceyl, muusig iyo Action isku jiro oo Sunny waqti badan galiyay si wiilkiisa marka kowaad soo dhaweyn wacan u helo.
Filimka Pal Pal Dil Ke Paas waxaa atirisho kowaad ka ah gabbar iyadana fanka ku cusub oo lagu magacaabo Saher Bamba mana kasoo jeedo qoys fanka Hindiya ku lug leh waxayna gabadhaan ku heshay sameynta filimkan inay tartankan u gashay oo gabdho badan ay kasoo dhex baxday qaab jiliinkeeda lagu xushay.
Saher Bamba waxay kasoo jeedaa magaalada Shimla waxaana inta badan lagu duubay filimkan Pal Pal Dil Ke Paas Manali oo ay Shimla isku dhow yihiin dhaqan ahaan waana sababta ka caawisay gabadhaan inay hogaamiye ka noqoto Karan Deol filimkiisa kowaad.
Waxaan sugnaa waa dhawaan iyo macluumaad dheeri ah oo kasoo bixi doono filimka Pal Pal Dil Ke Paas oo haatan jadwalkiisa ugu dambeeyo magaalada Mumbai lagu duubayo.